A gun shop owner demonstratesaRuger AR-15 semi-automatic rifle, Nov. 7, 2017, in Lynnwood, Wash.
(၁) Lower the Bar
Lower က အောက်ကိုနှိမ့်ချတာ the Bar ကအဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ၊ ဒီနေရာမှာ ဘားတန်း ၊ တုတ်တန်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပါယ်က တားထားတဲ့ ဘားတန်းကို အောက်ကိုနှိမ့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။ High Jump အမြင့်ခုန်ရာမှာ ဘယ်နှစ်ပေခုန်နို်င်လဲဆိုတာ သိရဖို့ ဘားတန်းကို တားထားရတာဖြစ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်သူအနေနဲ့ ဘားတန်းကို မထိပဲ ကျော်လွှားခုန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တားထားတဲ့ ဘားတန်းကို နှိမ့်ချတယ်ဆိုတဲ့ သဘောက ခုန်သူအနေနဲ့ သိပ် မြင့်မြင့်ခုန်ဖို့ မလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Idiom ဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က စံတန်ဖိုးတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေကို လျော့ပေါ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲတော် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို အမေရိကန်သမတ Donald Trump ရဲ့ သမီးလည်းဖြစ် သူ့ရဲ့ အကြံပေးတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Ivanka Trump သွားရောက်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုးရီယားသမတ Moon Jae-In နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သလို မြောက်ကိုရီယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Kim Yong Chol နဲ့လည်း သမတ Moonသီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြောက်ပိုင်းက အမေရိကန်နဲ့ ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သမတ Moon အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန်အကြား ဆွေးနွေးပွဲကို ဖြစ်မြောက်စေလိုတဲ့အတွက် အမေရိကန်က မြောက်ကိုရီယားအပေါ် နူးကလီးယားအစီအစဉ်ရပ်တန့်ဖို့ဆိုတဲ့ ကြိုတင်တောင်းဆိုချက်ကို လျော့ချပေးဖို့ အကြံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Washington Post သတင်းစာကြီးက Seoul – US must lower its bar for talks with North လို့ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
The private college has lowered the bar for students seeking entrance to study business.
စီးပွားရေးပညာလေ့လာဖို့ ၀င်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်ကို ကျောင်းသားတွေအတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကောလိပ်က လျော့ချပေးလိုက်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
(2) Call the Shots
Call က ခေါ်တာ၊ အော်ပြောတာ၊the Shots က သေနက်နဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က သေနတ်ဘယ်တော့ပစ်ဟေ့ ဆိုတာကို အော်ပြီးတော့ အမိန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်မှုက ဖြစ်ပါတယ်။ သေနတ်ပစ်တဲ့လူအနေနဲ့ ဘယ်တော့ ပစ်ရမလဲဆိုတာကို သင်တန်းပေးတဲ့ဆရာရဲ့ အော်ပြီး ပေးတဲ့အမိန့်ကို နားထောင်ရတာဖြစ်ပြီး၊ ပစ်ဆိုမှ လိုက်ပစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ အသုံးရဲ့ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတာ ၊ ညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်တာ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ နေရာမှာရှိနေတာ၊ ကျမတို့ မြန်မာဘန်းစကားမှာ ဆိုရင်တော့ လိုအပ်သည်များကို ညွှန်ကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို တရုတ်သမတ ရှင်ကျင့်ပင့်က ငါးနှစ်စီရှိတဲ့ သမတသက်တမ်းမှာ အခု ဒုတိယသက်တမ်း ထမ်းဆောင်နေပြီး၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ သူ့ သမတသက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက သမတ သက်တမ်း ကန့်သတ်ချက်ကို ဖွဲ့စည်းပုံက ပယ်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီး တကယ်လည်းပဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာမို့ Washington Post သတင်းစာကြီးက Xi is reminding China,and everyone else, that he will be calling the shots for years to come – Xi က တရုတ်နိုင်ငံအပြင် တခြားလူတိုင်းကိုပါ အသိပေးနေတာက နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အတော်ကြာထိပဲ သူ့အနေနဲ့ အာဏာကို စွဲကိုင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီ အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
He might be our boss at work but at home it’s his wife who calls the shots.
ရုံးမှာတော့သူက ကျနော်တို့ ဆရာသမားဖြစ်ပေမယ့် အိမ်မှာတော့ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့သူက သူ့ဇနီးပဲဖြစ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
(3) Pick up the tab
Pick up (ကောက်ယူလိုက်တာ)၊ the tab က ဘန်းစကားဖြစ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အရောင်းဆိုင်တွေကပေးတဲ့ ကျသင့်တဲ့ငွေ ပြေစာဖြတ်ပိုင်း (Receipt) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ငွေပြေစာဖြတ်ပိုင်းကို ကောက်ယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကျသင့်တဲ့ငွေကို တာဝန်ယူ ရှင်းပေးတာ၊ ကျသလောက်ကို ငွေထုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Pyeongchang မှာ မကြာမီကကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ခေါင်းဆောင် Kim Jong-un ရဲ့  ညီမအပါအဝင် ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့သား (၁၃၇) ဦးနဲ့ အားကစားသမားများ စုစုပေါင်း လူ (၅၀၀) ကျော် လာရောက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ (၂.၇) သန်းကို ကျခံဖို့ တောင်ကိုရီးယားက သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် The Wall Street Journal သတင်းစာကြီးက North Korea leaves the South to pick up its Olympics tab ၊ မြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့ အိုလံပစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို တောင်ပိုင်းကို ကျခံစေမယ်လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Lower the bar, Call the Shotsနဲ့Pick up the tab တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။